Kolontsaina Aziatika: Fomba sy fomban-drazana aziatika | Vaovao momba ny dia
Maria Jose Roldan | | Shina, Tailandia, Fitsangatsanganana any Azia
Rehefa mieritreritra an'i Azia ianao, Japon ary Shina dia mety ho tonga ao an-tsainao ho firenena lehibe, fa ny zava-misy dia i Azia dia firenena maro no maro ary ilaina ny mahafantatra azy rehetra hahafantarana ny Kolontsaina aziatika ary ny fomba tsy hitovizany amin'ny toerana samy hafa.
Ny kaontinanta aziatika dia misy firenena 48: 41 aziatika araka ny tokony ho izy ary 7 Eurasia. Ao amin'ny rakipahalalana rehetra dia ahitanao ny anaran'ny firenena ankehitriny ary ho hitanao hoe firy ny firenena mandrafitra ity kaontinanta ity, saingy tsy hiresaka aminao momba ny fomba amam-panao sy ny fomba amam-panaon'ny firenena tsirairay aho, fa izaho dia ny miresaka aminao fotsiny momba ny sasany amin'izy ireo, izay heveriko fa fomban-drazana manokana na farafaharatsiny, izay manintona ny saiko ary te hizara aminao aho.
1 Kolontsaina aziatika: fomban-drazana sy fomba amam-panao
3 Ny fetibe fanilo
4 Ny ady anaty rano any Thailand
5 Esory ny kiraro ho fanehoana fanajana
6 Nomera majika ao Shina
7 Miarahaba any Sina
8 Mitandrema amin'ny ranomainty mena ao Shina
9 Aza mampiasa ny tanana havia any Indonezia
10 Tsy misy torohevitra any Japon
Kolontsaina aziatika: fomban-drazana sy fomba amam-panao
Manerana an'izao tontolo izao dia misy fomba amam-panao sy fomba amam-panao maro, satria izy rehetra ireo no mahatonga antsika hanana fahatsapana ho anisan'ny vondrom-piarahamonina. Ny zava-misy dia afaka gaga isika Tandrefana amin'ny kolontsaina aziatika, satria amin'ny zavatra sasany dia mahatonga antsika hahatsiaro tena ho lavitra azy ireo izy ireo, fa amin'ny hafa kosa mety ampianariny antsika soatoavina izay tsy fantatsika na tsy tiantsika hojerena. Azia dia kaontinanta iray izay afaka mahatonga antsika hahita zavatra tsy mampitombina amin'ny fireneny. Saingy tsy mila maharitra intsony aho, hiresaka aminao momba ny sasany amin'ireo fomba amam-panao malaza indrindra amin'ny kolotsaina aziatika mety hahaliana anao.
Kanamara Matsuri dia midika zavatra toa izany "Ny Fetin'ny phallus vy". Antsoina izy io satria ny angano dia milaza fa nisy demonia nify maranitra niafina tao anatin'ny fivavian'ny tovovavy iray ary nandritra ny alin'ny fampakaram-badin'ilay vehivavy dia namoaka lehilahy roa ny demonia ka mpandrafitra iray no namorona phallus vy hamaky ny nifin'ny devoly. Avy amin'ilay anarana dia azonao atao ny mieritreritra fa ny festival dia mifandray amin'ny fahavokarana ary atao isaky ny lohataona any Kawasaki (Japon). Na dia miovaova aza ny daty, dia matetika ny alahady voalohany amin'ny volana aprily. Ny lohahevitra lehibe dia ny fanajana ny filahiana, marika iray izay tena hita eo amin'ity festival ity, ary angonina ny vola hanaovana fikarohana manohitra ny SIDA.
Ny fetibe fanilo
Manamarika ny fiafaran'ny fankalazana ny taom-baovao sinoa ny Fetiben'ny Fanilo ary amin'ny volana fenomanana voalohany amin'ny taona no nitrangan'izany. Alina manokana, majika ary feno jiro tanterahan'ny Sinoa. Amin'ny alina dia misy jiro sy jiro an'arivony maro izay tototry ny trano sy tranobe.
Niaina tamim-pifaliana ity festival ity ary misy ny matso, mozika, amponga, dihy, akrobat ... ary afomanga. Ny ankizy mitondra lanternaly sy fianakaviana mivory hihinana vary ary miantso harena sy firaisan-kinan'ny fianakaviana.
Ny ady anaty rano any Thailand
Ity fanao amin'ny kolontsaina aziatika ity dia antsoina hoe Songkran Festival ary io no fialan-tsasatra lehibe indrindra any Thailand. Songkran dia taom-baovao bodista, fomban-drazana ny olona mandena ny tarehimarika buddha ary naneho fanajana toy izany tamin'izy ireo. Rehefa nandeha ny fotoana dia niova ity fomba amam-panao ity ary nanjary ady anaty rano teo amin'ny olona, ​​satria amin'ny ankolafy maro karazana toy izany matetika dia misy toaka be ihany koa. Izany dia atao amin'ny làlambe Khao San any Bangkok.
Esory ny kiraro ho fanehoana fanajana
Ny iray amin'ireo fomba amam-panao amin'ny kolontsaina aziatika dia misy esory ny kiraro ao an-trano zavatra miparitaka eran'i Azia izy io. Atao izany ho mariky ny fanajana na satria tsy maintsy mijanona ho madio ny gorodona. Ka raha mitsidika olona avy any Azia ianao ary mankany an-tranony dia zava-dehibe amin'izy ireo ny hamelanao ny kiraronao any ivelan'ny tranony ho mariky ny fanajana.
Fantatrao ve fa mino nomerao majika ny Sinoa? Eny, momba ny laharana 8, izay araka ny finoana sinoa dia isa tsara vintana izay misy ifandraisany amin'ny vola sy ny fampiroboroboana. Matetika ny mpivady maniry fanambinana dia manambady amin'ny faha-8 isam-bolana, tsara kokoa aza raha amin'ny 8 Aogositra. Toy ny hoe tsy ampy izany, ho liana ianao hahafantatra fa ny fanandroana sinoa dia misy famantarana zodiaka 8. Manana teboka kardinaly 8 koa izy ireo, sns. Kisendrasendra tsotra sa tena isa miavaka ny 8?
Miarahaba any Sina
Tokony ho fantatrao izany any Shina dia tsy arahabaina toy ny any Andrefana, sorohy ny oroka satria mahatafintohina olona ianao. Aleo mifanome tanana raha manao fiarahabana feno fanajana. Ity fomba fiarahabana ity dia mety hifandona be amin'ny fiarahabana feno fitiavana ataon'ireo olona hajaintsika sy ireo izay vao hitantsika.
Mitandrema amin'ny ranomainty mena ao Shina
Raha any amin'ny fivorian'ny orinasa ianao ary mila mandray naoty kely na mandefa naoty, aza atao amin'ny ranomainty mena intsony satria ny volon'io loko io dia ampiasaina amin'ny tolo-kevitra sy fitarainana tsy mendrika. Ka ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny manana penina misy ranomainty mainty na manga ao am-paosinao, amin'izay dia azonao antoka fa tsy hanafintohina olona manana loko amin'ny ranomainty.
Aza mampiasa ny tanana havia any Indonezia
Amin'ny tranga Indonezia Ohatra, tsy tokony hampiasa ny tananao havia mihitsy ianao hanolotra zavatra amin'ny olon-kafa satria io fihetsika io dia mariky ny tsy fanajana, na ahoana na ahoana dia ampiasao ny tananao ankavanana. Ary toy izany koa ny fiarahabana na ny fifandraisana amin'ny olon-kafa, ny tanana havia dia tsara kokoa ny tsy mampiasa azy io, maniry hatrany ny hanana malalaka malalaka.
Tsy misy torohevitra any Japon
Raha any Japon ianao, any amin'ny tanin'ny masoandro miposaka aza manondro trano fisakafoanana mihitsy. Fanao amin'ny tsiro ratsy io ary afaka manafintohina ilay olona nitory anao ianao.
Ahoana ny Kolontsaina aziatika? Notantaraiko taminao ny momba ny sasany amin'izy ireo avy amin'ny fireneny sasany, te-hilaza aminay bebe kokoa ve izay fantatrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Shina » Kolontsaina aziatika
Ady Arsenius dia hoy izy:
Vaovao kely izany, fa raha tsy fantatrao na inona na inona, tsara izany. zavatra dia zavatra ary isan'andro dia mianatra bebe kokoa ianao
Valiny ho an'i Arsenio Guerra